एसईईमा सबै भन्दा धेरै नम्बर ल्याएर चर्चामा रहेका रोजन पाण्डे पहिलोपटक मिडियामा !! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/एसईईमा सबै भन्दा धेरै नम्बर ल्याएर चर्चामा रहेका रोजन पाण्डे पहिलोपटक मिडियामा !!
एसईईमा सबै भन्दा धेरै नम्बर ल्याएर चर्चामा रहेका रोजन पाण्डे पहिलोपटक मिडियामा !!
१२ असार, काठमाडौं । यस वर्ष एसईई परीक्षा दिएका १५ बर्षीय रोजन पाण्डेले एसईई टप गरेका छन। बिहीबार सार्वजनिक भएको नतिजाअनुसार उनले ४ जीपीए ल्याएर सबै भन्दा धेरै अंक सहित उनि पहिलो बन्न सकेका थिए । यसै वर्ष परीक्षा दिएर सबैलाई उनले चकित बनाएका थिए भने गत बर्ष पनि रोजन पढेकै स्कुलले बोर्ड टपर गरेर देखाएको थियो।
उनि यसै क्रममा पहिलोपटक मिडियामा आएका छन।आफुले सोचे जस्तै नतिजा आएको भन्दै उनि अत्यन्तै खुसि भएको देखिन्थ्यो एता उनकी आमा भने भाबुक भईन।छोरालाई उनले भने जस्तै बिधालयमा पढाउन नसकिने पिर उनीमा थियो भने छोराले महँगो कलेज रोजिरहेको देखिन्थ्यो।हेरौ हामीले लिएको बिशेष अन्तरबार्ता :
स्वर्गीय प्रकाश दाहालको २१ अर्बको सेटिङ मिलाउन प्रचण्ड युएई गएको खुलासा !!
ज्यान मार्ने धम्कि आएपछि बखत र लेख श्रीमतीसहित प्रहरी चौकीमा (हेर्नुहोस् भिडियो)